शुभकामना ! हैदराबाद दिल्लीसँग यसकारण पराजित :अब फाइनल दिल्ली चेन्नईसँग भिड्ने - सुदूर नेपाल
शुभकामना ! हैदराबाद दिल्लीसँग यसकारण पराजित :अब फाइनल दिल्ली चेन्नईसँग भिड्ने
आइपिएल एलिमिनेटर खेलमा दिल्ली क्यापिटल्सले सनराइजर्स हैदराबादलाई २ विकेटले पराजित गरेको छ।हारसँगै हैदराबादको आइपिएल-१२ को यात्रा सकिएको छ भने जितसँगै दिल्ली क्वालिफाइयर-२ मा प्रवेश गरेको छ। अब उसले फाइनल प्रवेशका लागि चेन्नई सपुर किङ्सलाई पराजित गर्नुपर्नेछ। दोश्रो क्वालिफायर मे १० मा हुनेछ। यस म्याचको विजेताले उपाधिका लागि मुम्बई इण्डियन्ससँग खेल्नेछ।दिल्लीको जितममा पृथ्वी शाँ तथा ऋषभ पन्तको दमदार ब्याटिक कारक रह्यो।
दिल्लीका लागि ओपनिङ् ब्याट्सम्यान पृथ्वी शाले ५६ रनको शानदार पारी खेले। त्यस्तै ऋषभ पन्तले पनि ४९ रनको योगदान दिए।त्यसअघि ब्याटिङ गरेको हैदराबादका लागि मार्टिन गुप्टिलले सर्वाधिक ३६ रन जोडे। उनका अलावा मनीष पांडे र कप्तान केन विलियम्सके ३० र २८ रन बनाउँदा विजय शंकरले २५ रन जोडे भने मोहम्मद नबीले २० रनको योगदान दिए।
दिल्लीका लागि किमो पलले ३ विकेट लिए भे ईसान्त शर्माले २ विकेट लिदां ट्रेंट बोल्ट तथा अमित मिश्राले १-१ विकेट लिए।
त्यस्तै १६३ रनको लक्ष्य पछ्याउन आएको दिल्लीलाई पृथ्वी शा र शिखर धवनले राम्रो सुरूवात दिलाए। उनीहरू ७.३ ओभरमा ६६ रन जोडे। धवनपछि कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र ८ रनमा आउट भए। पृथ्वी शा पनि त्यसपछि ३ रन जोड्दा आउट भए। ८७ रनमा तीन विकेट झरेपछि दिल्ली केहि दबाबमा पुग्यो। यस परिस्थितिलाई ऋषभ पन्तले २१ बलमा ४९ रन बनाउँदै टोलीलाई लक्ष्य नजिक पुर्‍याए। जितका लागि मात्र ५ रन बाँकी छँदा पन्त आउट ए। त्यसपछि किमो पलले २० औं ओभरमा चौका प्रहार गर्दै दिल्लीलाई जित दिलाए।हिजोको खेलमा टस जितेर दिल्लीले हैदराबादलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। त्यसपछि ब्याटिङ गर्दै हैदराबादले दिल्लीलाई ८ विकेटको नोक्सानीमा १६३ रनको लक्ष्य दियो। सो लक्ष्यलाई दिल्लीले १९.४ ओभरमा हासिल गर्‍यो।
Previous Post: प्रधानमन्त्री ओली आज भियतनाम र कम्बोडिया जाँदै ! एका एक किन ?
Next Post: RIP! रहेन्न अब यि अभिनेता